Tiny Troopers 2: Ops manokana izao amin'ny Android | Androidsis
Tiny Troopers 2 dia ny fitohizan'ny fahombiazana lehibe an'ity studio lalao video fantatra amin'ny hoe Chillingo ity. Videogame izay ametrahany antsika anjara andraikitra amin'ny fitarihana miaramila mpiady hiditra amin'ny ady samy hafa sy hamongorana ny fahavalo rehetra mametraka antsika eo alohantsika. Ho an'ity dia manaraka ny torolàlana mitovy amin'ilay lohateny Tiny Troopers voalohany miaraka amin'ny sary mifanentana tsara sy lalao tena tsara izany mba hahafahantsika mandray andraikitra haingana ary tsy handany fotoana mihitsy.
Amin'izay mba Chillingo dia mitady fahombiazana hafa amin'ity Tiny Troopers 2 ity ary mandritra ny fotoana nahafahako nilalao lalao tsara dia mampanantena zavatra betsaka izany. Tsy ho lasa Call of Duty ho an'ny finday izany fa hanampy antsika hiatrika tsara kokoa ireo ora mafana amin'ny tolakandro amin'ny andro fahavaratra izay efa nananantsika nandritra ny herinandro vitsivitsy. Ary ny Troopers Tiny no hanananao azy maimaim-poana avy amin'ny Play Store miaraka amin'ireo akora rehetra hahatonga azy io ho iray amin'ireo lalao tianao indrindra mandritra ny herinandro vitsivitsy.
1 Asa fitoriana aorian'ny iraka
2 Fiara tanky sy maro hafa
Asa fitoriana aorian'ny iraka
Tiny Troopers 2 us hametraka haingana amin'ny asa aorian'ny fandefasana lesona mini hahafantarana ny sasany amin'ireo baiko fototra Mba hahafantarana ny fomba fitondran-tena rehefa te hanafoana antsika ny fahavalo amin'ny fotoana voalohany.
Amin'ny fotoana hanombohantsika miaraka amin'ireo iraka voalohany dia tsy maintsy hiandraikitra miaramila mpiady iray isika amin'ny alàlan'ny andiana iraka. Ny iraka ataontsika dia ny handidy azy ireo ary hilaza amin'izy ireo ny lalana tokony halehantsika mba hahafantarantsika ny fomba hanaovana ny fifandonana mety sy hahagaga ny fahavalo.
Inona no foto-kevitra tsotra handehanana eny an-tsaha amin'ny alàlan'ny fanalahidy tsotra, Mitranga ihany koa ny fananana rafitra fanatsarana fitaovam-piadiana sy fitaovana tamin'izay efa RPG. Mazava ho azy, ny ambaratonga mahazatra dia tsy ho tsy ampy hivoarana amin'ny alàlan'ny lalao video miaraka amin'ireo miaramila sy hery mitifitra tsara indrindra.
Fiara tanky sy maro hafa
Tsy hijanona amin'ny fahefana fotsiny isika manatsara ny miaramila, manaingo ny fanamiany, manavao ny fitaovam-piadiany na manatsara ny tanjaka ny akanjony tsy misy bala, fa hiditra amin'ny hery manokana ihany koa isika izay hamela antsika hiditra amin'ny dokotera, fitaovam-piadiana mahery, flamethrowers ary tanky hizarana baomba havia sy havanana koa.
Miaramila kely 2 miavaka amin'ny fahatsoran'ny fifehezana azy, atiny iray izay haharitra ora vitsivitsy handinihana sy ho an'ny kalitao teknika tsara isaky ny antsipiriany. Avy amin'ny sary 3D, ny feo mifanentana amin'ny tsirairay amin'ny basy submachine na tifitra, ary inona no mety ho fahasahiranana voafidy ka tsy dia mora loatra ary tsy dia sarotra loatra.
Efa fantatray ny fomba amin'ity no maha samy hafa ny lalao video mahomby na mijanona amin'ny iray hafa. Izany hoe, azo alaina maimaimpoana amin'ny Play Store miaraka amin'ilay maodely fanta-daza Freemium. Aza mandany ny fotoananao, ary milalao lalao hanandramana, dia tsy ho diso fanantenana ianao.
Troopers kely 2: Ops manokana
Amin'ny espaniola izany
Ny sary 3D-nao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Tariho ny tafikanao handresy amin'ny Tiny Troopers 2: Ops manokana
Ny Superbike World Championship dia miverina miaraka amin'ny SBK15 amin'ny findainao Android